Wiil Naafo Ah Oo Ka Hadlaya Dhibta Ka Haysata Dhismayaasha Dhaadheer | Gacanlibaaxnews
Wiil Naafo Ah Oo Ka Hadlaya Dhibta Ka Haysata Dhismayaasha Dhaadheer
January 11, 2019 - Written by C M
Waxa uu ka dhiidhiyey dhib isaga iyo inta la midka ah haysata. Waa nin dhallinyaro ah oo naafo na ah. Waxa uu inna la wadaagayaa dhibta ay ku hayaan dhismayaasha dhaadheer ee naafada laga qadiyey, loo na saamayn waayey meel ay ka fuulan. Waxa uu i na tusayaa in dhibtani aanay ahayn mid loo dulqaadan karo. Waa Mohamed Haldoor, waa suxufi ku nool magaalada Hargeysa. Waxa warbixintan ka diyaariyey Sidiiq Burmad oo u shaqeeya BBC.